Manana bisikileta ho an'ny daholobe ve i DC? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta ho an'ny daholobe dc - fanontaniana sy valiny voatanisa
Bisikileta ho an'ny daholobe dc - fanontaniana sy valiny voatanisa
Manana bisikileta ho an'ny daholobe ve i DC?
Miaraka amin'ny Capital Bikeshare anaoafakamaka abisikiletaavy amin'ny gara 500 mahery manerana an'i Washington,DC, faritra metro ary avereno any amin'ny toby fiantsonana rehetra akaiky ny toerana halehanao. Zahao abisikiletaho an'ny dianao any am-piasana, Metro, manao raharaha, miantsena, na mitsidika namana sy fianakaviana.
Capital Bikeshare dia fomba tsara hitetezana ny tanàna. Saingy misy zavatra manan-danja tokony ho fantatrao fa holazaiko aminao amin'ity lahatsoratra ity, ary mijanona mandritra ny sasany amin'ireo hacks Bonus Capital Bikeshare hatramin'ny farany. Tongasoa eto amin'ny Trip Hacks DC.
Raha tonga any Washington DC ianao ary mitady ny torohevitra, tetika ary hacks tsara indrindra hitety ny tanàna, dia misorata anarana amin'n ity fantsona ity sao diso fanantenana ianao. Ary raha liana amin'ny fampisehoana amiko anao ianao dia tsidiho ny tranokalakoTripHacksDC.com hijerena izay azoko atolotra.
Raha nampiasa Capital Bikeshare na rafitra fizarana bisikileta any an-tanàna hafa ianao ary manana toro-hevitra na hacks tianao hozaraina dia avelao ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity ary ampahafantaro ahy, zava-dehibe mitovy raha tsy tokony hampiasa ilay rafitra ianao. Ny antony ilazako izany dia satria talohan'ny nanaovako an'ity lahatsoratra ity dia nizaha ny ao amin'ny Yelp aho ary nahita hevitra marobe ratsy ho an'ny Capital Bikeshare amin'ny fanofana bisikileta mahazatra. Ireto misy antony telo lehibe tsy itiavanao mampiasa Capital Bikeshare: Voalohany, raha mila bisikileta mandritra ny fotoana maharitra ianao dia aza mampiasa Bikeshare.
Ireto rafitra fizarana bisikileta ireto dia natao ho an'ny dia fohy sy dia lavitra amin'ny faritra iray amin'ny tanàna mankany amin'ny faritra hafa. Hiresaka momba ny vidiny avy hatrany izahay. Ny fizarana bisikileta dia tsy safidy mety.
Faharoa, raha manan-janaka ianao dia aza mampiasa bikeshare. Tsy maintsy 16 taona farafahakeliny ianao afaka mitaingina bisikileta ireo ary amin'ny ara-drariny dia lehibe loatra amin'ny ankamaroan'ny ankizy izy ireo. Ary azafady aza apetraka ao anaty harona ny ankizy kely eo alohan'ireo bisikileta Capital Bikeshare.
Mety ho hita miharihary amin'ny ankamaroanao izany, saingy hitako matetika loatra io ary tsy hoe manohitra ny lalàna fotsiny, fa tena tsy azo antoka. Fahatelo, raha mila fiarovan-doha, hidy, na kojakoja hafa ianao dia aza mampiasa bikeshare. Ao amin'ny Capital Bikeshare dia mahazo bisikileta ianao ary izay no izy.
Raha misy zavatra hafa dia tokony hijery toerana toa an'i Bike & Roll ianao, izay ahafahanao mahazo bisikileta misy habe, fiarovan-doha, hidy, tranofiara ho an'ny ankizy, ary zavatra tsara hafa. Hamela rohy mankany Bike & Roll aho ao amin'ilay famaritana. Andao horesahintsika izao ny fomba fiasan'ny vidiny.
Mampalahelo fa tsy mora ny vidiny raha tsy mbola nampiasa rafitra fizarana bisikileta toy izao ianao. Ny saran'ny dia amin'ny ankapobeny dia ny saram-pahafahana miampy ny saram-pampiasa. Voalohany, andao hiresaka momba ny saram-pahafahana, izay azonao eritreretina ho toy ny sarany aloanao hidirana amin'ny bisikileta.
Misy safidy vitsivitsy eto. Amin'izao fotoana izao, afaka mandoa $ 2 ianao amin'ny diany tokana, $ 8 ho an'ny mpikambana 24 ora, $ 17 ho an'ny mpikambana telo andro, na $ 85 ho an'ny mpikambana iray taona. Ho an'ny mpitsidika mahazatra, ny iray amin'ireo telo voalohany dia tsy maninona. fa mila manao matematika kely ianao mba hahalalanao izay safidy mety indrindra aminao, ary hamela takelaka hosoka kely ao amin'ilay famaritana aho hanampy anao hamantatra izany.
Avy eo dia misy ny saram-pividianana anao arakaraka ny fotoana nahitanao ny bisikileta, ary eo no manomboka manjavozavo ho an'ny olona maro. Raha mijery bisikileta ianao, mitaingina azy ary mamerina azy any amin'ny dock ao anatin'ny telopolo minitra dia tsy mandoa sarany fanampiny ianao. Na izany aza, raha mitaingina azy mandritra ny 30 minitra ianao dia handoa $ 2 mandritra ny antsasak'adiny voalohany, avy eo $ 4 hafa mandritra ny antsasak'adiny manaraka, ary $ 8 hafa isaky ny antsasak'adiny nohamarininao ilay bisikileta. bisikileta, mitaingina manodidina ny adiny telo sy folo minitra, ary avereno.
Mandoa $ 38 ianao amin'ny saram-pampiasana miampy ny saram-pahafahana nandoaanao tamin'ny voalohany. Azoko tsara ny manafangaro izany amin'ny olona iray izay nanao fikarohana voafetra na tsy nisy, niseho ary nahita fandaniana $ 24 24 ora ary mieritreritra hoe: 'tsara! bisikileta tsy voafetra ho an'ny $ 8 '. Antenaina fa, izao efa hitanao izao dia tsy manao hadisoana rookie toa izao ianao.
Mba hialana amin'ny fahazoana vola dia mila ferana hatramin'ny 30 minitra na latsaka ny dianao tsirairay. Mampiasà Capital Bikeshare hizorana avy amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B, fa tsy hamily fiara manodidina ny tanàna. OK, izao rehefa norakofantsika izany dia andao hivoaka any ivelany ary hasehoko anao ny fomba tena fampiasana ilay rafitra.
Afaka manomboka amin'ny toby fizarana bisikileta lehibe ianao. Mandehana any amin'ny kiosk ary kitiho ny bokotra 'Rent a Bike'. Ny zavatra voalohany hangatahana aminao dia ny mamafa ny carte de crédit anao.
Homena fampitandremana ianao avy eo momba ny sarany fampiasana. Azonao atao ny manindry eny raha hanaiky fa salama tsara ianao izao dia fantatrao ny fomba fiasan'izany. Safidio avy eo izay karazana mpikambana tianao hovidiana.
Ho an'ity lahatsoratra ity dia nanao dia iray aho. Afaka mandray bisikileta iray na roa isaky ny carte de crédit ianao, fa raha misafidy roa ianao dia handoa roa heny. Raha manana taratasy fanamarinana fanomezana ianao dia azonao atao ny mampiditra azy eto amin'ity efijery ity, fa ny ankamaroan'ny mpitsidika dia mety tsy hanao izany.
Hanome anao ny famintinana ny fifanakalozana sy ny vidiny voalohany. Tsindrio OK rehefa vita. Amin'ny efijery roa manaraka, ampidiro ny nomeraon-telefaona sy ny kaody zip momba ny faktiora mifandraika amin'ny carte de crédit anao.
Raha manana fitadidiana tsara ianao dia azonao atao ny mijery azy. Raha tsy izany dia azonao atao pirinty tahaka ny nataoko. Ento any amin'ny bisikileta misy anao ny kaody, ampidiro amin'ny keypad ary rehefa mahazo jiro maitso ianao dia afaka mandeha.
Hitako ny fomba mora indrindra hisintonana ny bisikileta, raha esorinao hiala amin'ny faran'ny seza izy avy eo, ary averinao miverina, nentiko ny fiarovan-dohako ho an'ity dia ity. Raha olon-dehibe ianao dia tsy mila izany ara-dalàna ao amin'ny Distrikan'i Columbia. Nefa tadidio fa raha mila fiarovan-doha ianao dia mila mitondra fiarovan-doha.
Rehefa vita ny bisikiletanao dia avereno miverina eo amin'ny dock izy ary tsindrio mafy mba hamerina azy. Raha mahomby ny fiverenana dia hahazo jiro maitso sy bip mahafinaritra ianao. Raha mahazo jiro mena sy feo mafy ianao dia tsy maintsy manandrana indray.
Alohan'ny hamaranana antsika dia avelao aho hanome hack hack bikeshare fanampiny. Ny voalohany dia ny misintona SpotCycle amin'ny telefaoninao. Ity dia rindrambaiko iray izay hampiseho aminao ny toerana misy ny tokantranon'ny bisikileta tsirairay ao amin'ny rafitra sy ny isan'ny bisikileta misy ary ny fantsom-piraketana misokatra.
bisikileta ho an'ny vao manomboka
Amin'ity fomba ity dia fantatrao mialoha raha ho bisikilety any izy ireo rehefa mila manamarina ny iray ianao ary dokam-barotra misokatra rehefa mila averinao izany, tena mamporisika anao hampiasa an'ity fampiharana ity aho ary hahazoana antoka fa misy dock malalaka eo amin'ny toerana itodihanao. izay tianao haleha ary ho hitanao ireo dock feno bisikileta. Izany no nolazain'ireo hackis manaraka nataoko fa azonao atao ny misoroka ny sazy na dia ao anatin'ny toe-javatra mitranga aza. Rehefa tonga eo amin'ny seranana iray ianao ary feno tanteraka dia afaka mankany amin'ny kioska ianao ary tsindrio ny bokotra crédit, avy eo swipe ny carte de crédit anao dia homena 15 minitra hafa ianao hitady dock hafa nefa tsy voaloa mandritra ny fotoana.
Ny hack farany nataoko dia tsy hack, raha ny marina: ampiasao ny fahaiza-misaina rehefa mampiasa Capital Bikeshare. Raiso toy ny fanaovanao bisikileta ny bisikiletanao, aza manao zavatra tsy hataonao any an-trano. Ohatra, aza atao fotsiny ny mametraka ny bisikiletanao Capital Bikeshare rehefa miditra ao amin'ny magazay iray ianao, Starbucks, na miakatra akaikin'ny Lincoln Memorial.
Mety tsy hieritreritra ianao hoe misy te hangalatra ny iray amin'ireo bisikileta ireo, fa raha manao izany izy ireo dia ho voatazona $ 1,200, ary tsy mendrika hanaovana risika izany. Ary dia izay! Misaotra anao nijery ity lahatsoratra ity. Raha hitanao fa mahasoa dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ilay fantsona amin'ny fipihana ny logo Trip Hacks DC izay hita eo amin'ny faran'ny efijery.
Ary raha tonga any DC ianao ary liana amin'ny iray amin'ireo fitsidihako dia azonao atao ny manindry ny sarin'ny Capitol Dome eo ankavanan'ny lohako izay hitondra anao any amin'ny tranokalaniko TripHacksDC.com ary ho hitanao ireo fitsangatsanganana izay tolotra . Ankafizo ny dianao!
Misy bisikileta Citi any DC?
Metro MetroDCamin'ny kodiarana roa
Tonga mpikambana ao amin'ny Internet na mividy pass pass fohy amin'ny app na kiosk hampiasa ny rafitra Capital Bikeshare.
Tsara ve ny bisikileta ampahibemaso?
5.0 amin'ny kintana 5Cutebisikileta,tsaravidiny! nybisikiletasomary mavesatra kokoa noho ny nantenaiko, ary ny tsy fisian'ny hazo fijaliana dia somary sarotra kokoa ny manantona ny kodia eo anoloana amin'ny rindrina. Izany dia nilaza fa amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra izanybisikileta, ary ampidiriny ao anaty tavoahangy kely misy loko fanampiny aza.
ity no bisikiletanay dutch ity dia bisikileta renibeny ara-bakiteny izy io fa tsy misy zavatra manokana farafaharatsiny eto Nerlandy fa any Canada ny any amintsika na firenena maro dia tena tsy manam-paharoa ity bisikileta ity ary tena nahagaga ahy ny bisikileta toa izao rehefa nitsidika ny teratany voalohany aho dia ny bisikilety zandary no hita fa fitaovana fitaterana isan'andro mba hahatongavana amin'ny teboka a mankany amin'ny teboka haingana sy mahomby. Ny ankamaroan'ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao dia mampiasa bisikileta indrindra amin'ny fanatanjahantena sy fanatanjahan-tena. Ity fahasamihafana iray ity dia manazava ny saika ny zava-drehetra momba ny bisikileta toy izao ankehitriny, tsy hoe io irery no karazana bisikileta anananao.
Mazava ho azy fa maro ny hafa any Pays-Bas, ao anatin'izany ny E-BikesCargo Bikes Handbikes ary tena hahita bisikileta amin'ny hazakazaka ianao, indrindra amin'ny faran'ny herinandro, fa ho an'ny tanàna isan'andro, io karazana bisikileta io no be mpahalala indrindra. Ka inona no mampiavaka ity bisikileta ity amin'ny mety ho anao? Ny tena maha samy hafa azy dia ity dia bisikileta mitsangana natao hoentina amin'ny toerana mipetraka mahitsizoro, toerana tsy mahomby izay tsy mamindra ny hery faratampony mankany amin'ny crank mandritra ny lalan'ny pedal, ary tena tsy aerodynamika io, fa iza mampaninona anao ve ny atolotry ny toerana avo? ny ambony sy ny lamosina dia mampahazo aina tokoa ny mitaingina bisikilety karazana ity, saika misintona ny tohin-tànana ianao ary miverina fa tsy manome lanja azy ireo. Ity dia fomba iray ahazoana aina kokoa amin'ny hipetrahana amin'ny bisikileta ary ny endriny dia mitovy amin'ny bisikileta azo antoka tany am-boalohany, izay novolavolaina tany Angletera, ny faran'ny taonjato faha-19 natsangana koa dia manamora kokoa ny mahita ny zava-mitranga manodidina anao, izay Mety ho azo antoka kokoa rehefa mandeha bisikileta amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe be olona.
Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mitafy karazan'akanjo tadiavinao satria tsy misy tsy itovizany amin'ny fipetrahana amin'ny seza Jereo ny ankamaroan'ny olona any Pays-Bas miakanjo ny tena ionona ary tsy mitaingina ity bisikileta ity. tena mora ny mivoaka sy mivoaka nefa tsy ahodinkodin-tongony toy ny bisikileta toa izao miaraka amin'ny tsato-kazo manify Ireo zana-kazo ireo ary tena ho hitanao eto izy ireo, saingy hitako fa manelingelina indrindra izy ireo raha manana seza akids ianao satria rehefa manondrika ny tongotrao ianao manitsaka ianao dia mandaka ny lohanao zanakao ary tsy azoko hoe maninona izahay no mbola miantso ireo bisikiletin'ireto lehilahy ireto nefa io no fomba tokana ahafahanao mikapoka ny tenanao satria mora kokoa ny mampiasa ireo zana-kazo alalàn'ny dingana. malaza amin'ny lahy sy ny vavy. Ity dia zavatra iray hafa manampy ny olona hitafy akanjo ara-dalàna rehefa mandeha bisikileta sy ny antony ahitanao ny vehivavy manao akanjo sy zipo. Raha miresaka zipo, ity zavatra ity dia antsoina hoe mpiaro zipo na mpiaro palitao ary fahita amin'ny bisikileta holandey.
Ireo mpandahateny tahaka ny hevitrao dia manampy amin'ny fisorohana ny zaza mipetraka eo an-damosiny tsy hianjera amin'ny tongotr'izy ireo hiaro ny akanjonao, ny mpiaro ny rojo dia plastika - na ny firakotra vy amin'ny rojo bisikileta dia manampy amin'ny fiarovana ny rojo amin'ireo singa sy fanaovana. maharitra ela kokoa - antsoina hoe hazo fisaka ilay zavatra eto ary saika ny bisikileta rehetra any Holandy dia azo ampiharina amin'ny antony maro, saingy saika tsy hitako tany ivelan'ny velarantany hita any Japon fa fomba mora hanidiana ny kodiarana aoriana amin'ny bisikiletanao hijanonana haingana izay tena manamora ny fidirana ao amin'ny magazay raha mitondra fiara ianao na aiza na aiza dia mihazona ny lakilanao ao anaty fefy ihany koa ny hidin-trano raha afaka mividy hidim-baravarana tsy mety ianao, fa izaho kosa Tsy dia tiako loatra ilay endri-pitahirizana lakile izay antsipiriany kely fa miantoka ny lakilen'ny bisikiletanao miaraka aminao foana aho, na dia fantatro aza fa nidona tsy nahy tamin'ny lakilako ny lakileny ary niondrika toy izao, oops na be dia be aza ny habaka ho an'ny l ny mekanika ocking ao amin'ny wheeli dia toa matetika no mahavoa ilay niteny mihoatra ny noeritreretinao hoe tokony ho lasa neutrinosis aho. Raha mihidy ity hidin-trano ity dia tsy afaka mitaingina bisikileta ianao, saingy mazava ho azy fa afaka mandray fotsiny ianao ary mandeha miaraka aminy. Ka raha tianao ho azo antoka fa mbola eo ny bisikiletanao rehefa miverina ianao, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mitondra hidin-trano miaraka aminao, ary manao izany ny ankamaroan'ny olona, ​​satria mahita ny bisikiletanao mihidy toy izany angamba satria ny tompon'ny bisikileta koa mampihetsi-po ho azy ireo mijanona hangalatra azy.
Ny fiovana kely amin'izany dia ny hidin-trano miaraka amina hidin-trano rojo izay manome anao hidiny roa miaraka amina lakile iray. Mahavariana fa ny padlocks dia ny hidin-trano mahazatra indrindra any Amerika Avaratra izay tsy dia matetika ampiasaina ao. Avy eo angamba satria noho ny bisikileta maro hafa dia sarotra ny manakaiky ny zavatra hidin-trano. Endri-javatra iray hafa izay ho hitanao amin'ny saika bisikileta rehetra any Holandy dia ny fender aloha sy ny aoriana.
Misy dikany izany any amin'ny firenena izay orana lalandava. Ny mpiambina fotaka dia tsy raisina ho toy ny fanampin-tsafidy safidy, izay tafiditra ao koa dia kickstand, saika ny bisikileta rehetra dia misy miampy ny fotaka izay hitanao matetika eo amin'ny fitoeran-kitapo, misy bisikileta eo alohan'ny porte porte. Amin'ny farany, ireo bisikileta ireo dia natao hahasoa.
Ka raha manana pannier ao an-damosinao ianao na boaty eo anoloana dia afaka mitondra zavatra be dia be ianao. Tsy misy valizy ilaina amin'ny enta-mavesatra ilaina amin'ny SUV any Netherlands izay matanjaka be ihany koa hitondra olon-kafa hitanao tsara matetika, fa avy eo ny zava-drehetra momba ny bisikileta holandey dia fitaovam-piadiana Hub matanjaka toy ireny paosin'ny iray-in-hub ireny satria tena saika tsy tokony hisy mihitsy. servisy. Hafa mihitsy izany amin'ny derailleurs, izay raha ny hevitro dia miala tsy mifanaraka amin'ny laoniny.
Tsy manana freins koa aho, bisikileta betsaka eto no manana freins, fa ity kosa mampiasa rakes coaster b izay ataonao amin'ny famadihana izay nahasarika ahy satria any Canada dia tsy hahita freins toa izao ianao raha tsy amin'ny bisikiletin'ny ankizy azony. taloha dia tsy maintsy, fa tena aleoko mitaingina izany satria mahatsapa fa voajanahary ny mandroso hanafainganana sy hivezivezy mihemotra hamaky nefa tsy misy frein-tanana na Gearsit mitazona ny bisikileta ho tsotra ary maimaimpoana ny fikojakojana, manakana ny tariby sendra tratry ny hafa bisikileta rehefa mijanona amin'ny toerana tery. Izany rehetra izany dia natao mba hitazomana ny bisikileta milamina tsara, izay zava-dehibe rehefa io no fomba fitaterana lehibe anao no hany olana nanananay tamin'ity bisikileta ity dia ny kodiarana fisaka indraindray ary miresaka momba ny kodiarana, fantatrareo ve fa izy ireo eto USA sy Canada dia mampiasa valizy kodiarana hafa, tsy misy afa-tsy valizy kodiarana roa Presta amin'ny bisikileta sy Schrader amin'ny zavatra hafa rehetra eto Holandy, mampiasa valizy tselatra izy ireo, ireo valvaly ireo dia manana baolina kely manakana ny rivotra tsy ho afa-mandositra. . te hahafanta-javatra ianao, azonao atao ny mampiasa paompy Presta mahazatra fotsiny hamenoana azy, paompy fotsiny amin'ny tsindry ampy tsara ary hisokatra ho azy ny valizy.
Zavatra iray hafa izay ho hitanao indraindray amin'ny bisikileta eto dia ny dynamo izay miditra amin'ny foiben'ny kodia na amin'ny kodiarana ary manome hery ampy hampandehanana jiro LED. Tsara be ireo satria tsy mila miahiahy momba ny famerenana bateria na fanadinoana ny jironao ianao. Zavatra kely iray monja izay mahatonga ireo bisikileta ireo ho mora ampiasaina isan'andro ary farany ny lakolosy amin'ity bisikileta ity dia manome feo mahafinaritra na dia tsy mila mampiasa lakolosy aza ianao eto.
Tsy maninona rehefa nipetraka tany Canada izahay, dia nahafantatra momba ny bisikileta Holandey mahitsy izahay ary nanandrana nividy azy ireo nandritra ny taona maro, saingy saika tsy ho hita izany. Ity sary ity dia mamintina ny zava-misy any Canada ny isan'ny safidy bisikileta izay heverina fa mandeha fotsiny amin'ny hybrida sporty sy bisikileta. Tsy tonga miaraka amina fenders na mijoro aza izy ireo fa mety misy fivarotana bisikileta mivarotra bisikileta mahitsy kokoa, fa fony nipetraka tany Toronto izahay fivarotana iray monja no nivarotra azy ireo ary ny iray hafa dia 50 kilaometatra miala eto Amsterdam no tsy azoko azafady raha tsy mikapoka fivarotana bisikileta am-polony mivarotra bisikileta miasa ho an'ny fitaterana fa tsy vondrona any Winnipeg, Kanada ? tena sosotra tokoa tamin'ny fahitana bisikileta azo tsapain-tanana ka nanomboka nanafatra bisikileta vaovao sy taloha avy any Netherlands. Miantso ny tenany ho Tetik'asa amin'ny bisikileta fiaramanidina izy ireo ary mandray kaontenera fandefasana feno bisikileta matetika avy any Netherlands ka manana bisikileta tsy natao ho an'ny bisikileta fanatanjahan-tena, ny lahasa voalohany dia ny eo rehefa ilainao amin'ny fivarotana na ny namanao. mitondra ary ampiasaina amin'ny ezaka kely araka izay azo atao, tsy mila fanovana manokana na fanovana akanjo, matetika no tsy raharahina izany satria mazava ho azy fa zava-dehibe ny fahazoana miditra mora amin'ny bisikileta mora karakaraina toa izao mba hanana fotodrafitrasa azo antoka amin'ny lalana sy bisikileta .
Mipetraka any Amsterdam aho. Fantatro fa ny bisikileta no matetika no fomba haingana sy mora indrindra hahatongavana any, fa zava-dehibe koa ny hahafantarako fa nandresy ny bisikiletako taloha be harafesina, tsy madio, mahasalama, azo ianteherana koa aho
Afaka mitaingina bisikileta any DC ve ianao?
Tsy misy lalàna milaza fa tsy maintsy mampiasa bisikilety abisikiletalane rehefairayomena. Grahsler hoymitainginaeo afovoan'ny làlana no fomba azo antoka indrindra alehamitainginanybisikileta any D.C.rehefa tsy misy abisikiletalane Rehefa eny an-dalana izy ireo dia mila manaraka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ary tsy maintsymitainginamiaraka amin'ny fifamoivoizana.11.07.2014
Afaka mitaingina bisikileta eny amin'ny sisin-dalana any DC ve ianao?
Bisikiletaamin'nysisin-dalanaavela ivelan'nyDCDistrikan'ny orinasa afovoany. Ireo mpitaingina bisikileta dia tsy maintsy milefitra amin'ny mpandeha an-tongotrasisin-dalana. Jiro fotsy fotsy izay hita mirefy 500 metatra sy taratra mena na taillight hita amin'ny 300 metatra no takian'ny lalàna rehefamitainginaamin'ny alina.
Fitaovana iraybisikileta,bisikileta an-tanàna, an-tanàn-dehibebisikileta, EoropeanaCity Bike(ECB), kilasikabisikiletana tsotratanàna-bisikileta, dia abisikiletanatao ho an'ny fitsangatsanganana fohy sy fohy matetika amin'ny faritra an-tanàn-dehibe.Bisikileta an-tanànadia mety ho fananan'ny tsirairay na ampiasainy ho ampahany amin'ny besinimarobisikiletafizarana fizarana.
Ohatrinona ny lanjan'ny bisikileta amin'ny besinimaro?
Ahoanabe no ataonybisikileta milanja? NYbisikileta milanjana aiza na aiza avy amin'ny 25-32 lbs, arakaraka ny habeny sy ny isan'ny fitaovana amin'nybisikileta.
Aiza no anaovana bisikileta ho an'ny daholobe?
Ankehitriny dia tanana-nanaovy vyvokarinaany Etazonia dia hitantana anao mihoatra ny $ 1500 ho an'ny frameset irery izay kely kokoa ary mila avy any ampitan-dranomasina izany.20 2011.
Takiana amin'ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta ve ny DC?
Ny lalàna dia manome baiko fa ny mpitaingina latsaky ny 16 taona diailainamitafy afiarovan-doharaha mbolabisikiletaao amin'ny Distrikan'i Columbia. Ny lalàna dia mitaky koa ny zaza latsaky ny 16 taona hitafy afiarovan-doharehefa mitaingina môtô scooter, skateboard, sled, coaster, fiara kilalao, na fitaovana mitovy amin'izany.
Afaka mahazo DUI amin'ny bisikileta DC ve ianao?
Diniho ny tenanao amin'ny fanamarihana. WUSA dia nitatitra fa nyD.C.Nanapa-kevitra ny Fitsarana ambony momba ny fisotroan-toaka iobisikiletampitainginaafakavoampanga ho nitondra fiara noho ny fitaomana.04.25.2010
Tsy ara-dalàna ve ny mandeha bisikileta maloto any DC?
Inona no azoko atao mitaingina arabe eny an-tanàna? Tsy ara-dalàna ny mitaingina bisikileta, bisikileta maloto na All Terrain Vehicle (ATV) na aiza na aiza amin'ny habaka ampahibemaso ao amin'ny Distrikan'i Columbia (ao anatin'izany ny arabe, ny arabe, ny arabe, ny làlan'ny bisikileta, ny làlambahoaka ary ny toeram-bahoaka hafa).
Aiza no ahazoako bisikileta any DC?
Makà bisikileta any amin'ny gara an-jatony manodidina ny faritra DC DC. Jereo ny fisian'ny bisikileta amin'ny System Map na fampiharana finday. Mandehana mitaingina fohy araka izay tianao raha mazoto ny pasanao. Ny fitsangatsanganana sy ny maha-mpikambana dia misy fitsangatsanganana bisikileta mahazatra tsy voafetra ao anatin'ny 30 minitra. Farano ny diany amin'ny alàlan'ny famerenana ny bisikiletanao amin'ny gara rehetra.
Ahoana ny fiasan'ny Capital Bikeshare any Washington DC?
Mandehana mitaingina fohy araka izay tianao raha mazoto ny pasanao. Ny fitsangatsanganana sy ny maha-mpikambana dia misy fitsangatsanganana bisikileta mahazatra tsy voafetra ao anatin'ny 30 minitra. Farano ny diany amin'ny alàlan'ny famerenana ny bisikiletanao amin'ny gara rehetra. Atsofohy mafy ao anaty docka foana ny bisikiletanao ary andraso ny jiro maitso hahazoana antoka fa mihidy izy.